Mmiri na-emepụta uru bara uru nke Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Data
Dịka ọrụ ndị ọzọ ntanetị , GitHub na-ewepụta ihe ọmụma site weebụsaịtị dị iche iche n'ụzọ dị ngwa ma dị irè. Ngwá ọrụ a na-ewepụ data site na ihe oyiyi ma mee ka nlegharị anya gị nwee ọmarịcha.
Ndị na-azụ ahịa na - aga n'ihu na - eleta ozi ma na - achọ ka a kpochapụ ya n'ụzọ dị irè, na - enweghị nsogbu na mma. GitHub bụ naanị ngwá ọrụ na-anakọta, nchịkọta ma chekwaa data gị na usoro ndị dị mma. A na-atụle ụfọdụ n'ime uru ndị dị iche iche n'okpuru ebe a.
1. GitHub na-enyere aka ịnakọta data volumous
GitHub, ịnwere ike ịnakọta na hazie data site na weebụ ma nwee ike ibudata ya na draịvụ ike gị kpọmkwem. Enwere otutu foto na vidiyo nke nwere ozi bara uru. Site na ọrụ ntanetị weebụ, ọ gaghị ekwe omume wepụ data sitere na PDF, JPG na PNG faịlụ. Otú ọ dị, GitHub na-eme ka ọ dịrị gị mfe iwepu ozi sitere na PDF akwụkwọ na ụdị faịlụ ndị ọzọ. Na nkenke, GitHub ga - enyere gị aka ịghọta usoro azụmahịa dị mma karị ma mepee ụzọ nke ohere ọhụrụ.
2. Gweta GitHub data ziri ezi:
Ihe nchịkọta data anyị na-eji anaghị enweta ezi ozi. N'adịghị ka ọrụ ndị ahụ, GitHub na-anakọta data n'ụzọ ziri ezi na nyochaa àgwà ya. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ iwepu ozi site na saịtị onye asọmpi, ị ga-agbalị GitHub. Ngwá ọrụ a na-eme ka njedebe dị elu ma ghara inye ọdịnaya ya abụọ na ndị ọrụ ya.
3. GitHub na-azọpụta oge gị:
ọsọ nke data dị na-eme ka ọdịiche dị iche. Na GitHub, ị nwere ike ibelata ihe oyiyi 20,000 na akwụkwọ Okwu na minit 50. Ya mere, ngwá ọrụ a na-echekwa oge na ike na usoro data na nnukwu ọsọ. GitHub dị mma maka mmalite na webmasters ma nyere ha aka ịmekwu ndị ọzọ na Ịntanetị.
4. Soro GitHub na-asọmpi:
Ijikwa ike nke data dị mkpa n'ịgbanwe. Na GitHub, ị nwere ike ịnọgide na-asọ mpi ma nwee ike ịchọta ihe ọmụma na ọnọdụ ahịa ugbu a. Ngwaọrụ a na-enye ozi gbasara saịtị e-commerce, ụlọ ọrụ FMCG, na ahịa, na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịchọpụta ebe ika gị na-eguzo. Atụmatụ ya na-egbuke egbuke na-enyere aka kwalite mgbasa ozi gị n'ụzọ ka mma.
5. Data niile n'otu ebe:
Na GitHub, ịnwere ike ịnweta data na usoro chọrọ. Ịntanetị na-emepụta octets nke ozi kwa minit. Ngwaọrụ a ga - enyere gị aka nyocha data site na ebe nrụọrụ weebụ na mgbasa ozi. I nwekwara ike ịdebe blọọgụ nkà na ụzụ na ebe nrụọrụ weebụ ịzụ ahịa iji melite ọkwa gị. Ikwesighi ime ihe gbasara emeghi ma obu nkata ihe ozo n'ihi na GitHub na-ahazi data gi n'usoro a na-edozi ma nwee ike chekwaa otutu oge.Ngwaọrụ a dị mma maka ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịntanetị, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ njem.
Mara mma nke ọrụ a nyocha bụ na ọ bụ nke a na-edozi edozi ma dabara ihe ị chọrọ na ụzọ ka mma. Na GitHub, ị nwere ike ịdekọ isiokwu nke ndị asọmpi gị, depụta ibe weebụ gị ma wepụ ihe ọmụma si n'ime ma na njikọ ndị ọzọ na-enweghị atụ. Otu nnukwu ụlọ ọrụ tụkwasịrị GitHub obi ma jiri ngwá ọrụ a na-eme ihe mgbe niile Source .